मतदाता जिन्दावाद ! - विचार/विश्‍लेषण - कान्तिपुर समाचार
निष्ठा र आस्थाको राजनीतिले मात्र निरन्तरता पाउनुपर्छ । नेताको औकातभन्दा पनि ल्याकतका आधारमा प्रतिनिधित्वको अवसर दिनुपर्छ ।
मंसिर २१, २०७४-निर्वाचनले वर्तमान र भविष्यको आचरण तथा व्यवहारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न राजनीतिमा खेलका नयाँ आधार निर्माण गर्छ र गर्नुपर्ने हो । निर्वाचनको विश्वसनीयताले नै प्रतिनिधित्वलाई वैधानिकता दिने गर्छ । निर्वाचन संस्कृति विकास नभएसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण हुनसक्दैन । प्रतिनिधित्व छनोटको प्रक्रिया लोकतान्त्रीकरण नभएसम्म विभिन्न समस्या आइरहन्छन् । त्यस अर्थमा निर्वाचन र जनप्रतिनिधित्वबारे आज मतदान गर्नुपूर्व एकपटक समीक्षा गर्नैपर्छ । लोकतन्त्रमा प्रतिनिधित्व छनोट तय गर्दा कसैको निर्देशन, उक्साहट वा दबाबबाट नभई स्वतन्त्र संवाद र विवेकपूर्ण छलफलबाट हुुनुपर्छ । संविधानले भनेजस्तै प्रत्येक नागरिक बराबर हैसियतको भएको कथ्यको पुष्टि मतदान प्रक्रियामा सबैको समान अंशियारी र सबै मतको बराबरी मूल्य तोकिनुले हुन्छ । तर यो निर्वाचन सबै नेपालीको जित हुने निर्वाचन बन्न सकिरहेको छ त ?
निष्ठाको राजनीति गर्ने अवसर ›